Chirming Poster - Dhizaini magazini
Poster Sook paakanga achiri mudiki, akaona shiri yakanaka pamusoro pegomo asi shiri dzakakurumidza kubhururuka dzichienda, zvichisiya ruzha chete shure. Akatarisa mudenga kuti awane shiri iyi, asi chaakakwanisa kuona chete aive matavi emuti uye sango. Shiri yakaramba ichiimba, asi iye akange asina zano kwazvaive. Kubva padiki kwazvo, shiri yaive matavi emuti uye sango rakakura kwaari. Chiitiko ichi chakaita kuti aone kurira kweshiri sango. Kurira kweshiri kunozorodza pfungwa nemuviri. Izvi zvakamubata, uye akabatanidza izvi nemandala, zvinomiririra kuporesa nekufungisisa.
Zita rechirongwa : Chirming, Vagadziri zita : Sook Ko, Izita remutengi : Sejong University.